Ọrụ Ndị Na-agbanwe Mgbanwe malitere na Altınkayı Boulevard - RayHaber
[18 / 10 / 2019] Akara Mbinye aka maka Isi Obodo Noiseless	06 Ankara
[18 / 10 / 2019] Oge Ego Kaadị Ego maka ndị debanyere aha ụmụ akwụkwọ nọ na Ankara	06 Ankara
[18 / 10 / 2019] Akara Eskişehir nke Belarus Metro	26 Eskisehir
[18 / 10 / 2019] Bursa bu nani olile anya nke ugbo elu Çanakkale!	16 Bursa
[18 / 10 / 2019] Mkpu Mkpesa Metrobus!	34 Istanbul
[18 / 10 / 2019] Kayaş-Sincan Başkentray Line Na-agbatị 18.4 Km	06 Ankara
[18 / 10 / 2019] Mayor Yüce chọrọ ịga na akụkọ ihe mere eme site na iweta usoro ụgbọ oloko na Sakarya	54 Sakarya
[18 / 10 / 2019] Ndị nnọchi anya IZTO weputara Minista Turhan na atụmanya nke Ngalaba Ahịkọ Izmir	35 Izmir
[18 / 10 / 2019] Imekọ ihe ọnụ na Ethiopia ga-mepụtara na Railway Sector	06 Ankara
[18 / 10 / 2019] Ndị ọrụ ugbo Aydınlı chọrọ ụzọ ụgbọ oloko eletrik nke Turhan	09 Aydin
HomeTurkeyEastern Anatolia Region44 MalatyaỌrụ Mgbanwe Mgbanwe malitere na Altınkayı Boulevard
Ọrụ Mgbanwe Mgbanwe malitere na Altınkayı Boulevard
09 / 10 / 2019 Levent Elmastaş 44 Malatya, Eastern Anatolia Region, General, Ụzọ Awara Awara, Turkey 0
Altinkayisi boulevard ọmụmụ mgbanwe mgbanwe malitere
Malatya Obodo ukwu na-arụ ọrụ na mgbanwe, mgbanwe na mmegharị ọhụụ na-arụ ọrụ na Golden Apricot Boulevard, nke bụ nnukwu boulevard na Malatya, nke na-ejikọ Tecde na Maşti junction.
Ogologo nke 3.3, obosara nke 50 nke Golden Apricot Boulevard tupu akụkụ nke kilogram 1.1 banye ebe obibi nke Obodo ukwu, akụkụ kilogram 2.2 nke fọdụrụ malitere ịmalite ọrụ.
Onye isi obodo Obodo Selahattin Gürkan, Golden Apricot Boulevard ma kwuo okwu, kwuru okwu banyere ọrụ a ga-arụ. Onye na-esote odeakwụkwọ ukwu Latif Okyay na ụfọdụ ndị isi ngalaba na ndị isi ngalaba sonyere njem ahụ.
Mehmet Mert, Onye isi ngalaba Mịnịstrị na-ahụ maka ihe owuwu na ihe owuwu, kwuru na ha bidoro ịrụ ọrụ na Golden Apricot Boulevard nke bụ otu n’ime ụzọ ndị a na-ejikarị eme ihe na Malatya n'ihe gbasara mmegharị ụgbọala kemgbe ụbọchị e mepere ya. Anyị na-eme usoro PMT ugbu a tupu asphalt. 2.2 ga-emeghe ụzọ anyị maka okporo ụzọ n'ehihie. "
Gürkan: Boulevard anyị ga-enwe ọhụụ mara mma karịa mgbe anyị gụchara
Onye isi obodo Selahattin Gürkan kọwara na ha amalitela ịrụ ọrụ n'ime ka Golden Apricot Boulevard dabara na Malatya, "Anyị mere atụmatụ ụzọ boulevard ahụ dịka ọpụpụ 3 na mbata 3. Ozugbo ụbọchị 15, anyị ga-emecha ọrụ asphalt ebe a. Anyị nwere mmetụta ọsọ ọsọ banyere mmalite nke ọrụ na oge iji rụchaa. Ebe obu na anyi achoghi ka nsogbu ghara ime ka obodo anyi ghara ime ihe omumu a. A ga-ebido n'akụkụ ụzọ, ọkụ, ịkpụcha ala, na etiti ọrụ n’oge adịghị anya. Anyị na-arụ ọrụ na-akụ osisi na-enweghị nnukwu mmiri na etiti etiti anyị. Anyị boulevard ga-enwe ọmarịcha mma na ọdịdị ala. ”
Mgbe okporo ụzọ niile dị na mpaghara a rụchara, ụmụ amaala anyị ga-enwe ahụ iru ala
N’imesi ike na a ga-ejikọ ọla edo Awụsị Boulevard na Saray Bosna Street ma jikọọ Fahri Kayahan Boulevard, Mayor G Mayorrkan kwuru, “Boulevard anyị na-agakọ n'okporo ụzọ Mıhlıdut. Iji mee ka okporo ụzọ na-agafe ka ọ gbasie ike, anyị mere ụzọ nkwụchi mara mma nke ebe okporo ụzọ Altınkayı-Güngör-Mıhlıdut na-ezukọ. Akụkụ kasịnụ nke mpaghara a bụ Akwụkwọ Apịtị Golden, mgbe anyị jikọrọ ya na Saray Bosna Street nke anyị meghere na ọdịda anyanwụ, anyị ga-enwe ụzọ ọhụụ na mpaghara ọwụwa anyanwụ. Nke a ga - eme ka okporo ụzọ ndị dị n'obodo mepere emepe nwee akụkụ ọdịda anyanwụ nke ụzọ mgbanaka. Anyị boulevard bụkwa otu n'ime isi njikọ nke South Belt okporo ụzọ. Mgbe ụzọ niile dị na mpaghara a rụchara, ụmụ amaala anyị ga-enwe ahụ iru ala ”.
Gbanwee na Bursa 'Altıparmak' na 'okporo ígwè' 06 / 11 / 2012 Bursa Mayor Altepe, T1 akara Altparmak nchọpụta na nchọpụta, ọrụ ga-agwụ agwụ 20 ụbọchị mgbe ihu nke Altiparmak'ın kpamkpam mgbanwe, o kwuru. Metro edoghi na Nchikota nke oge a malitere tram edoghi niile distrikti, na-emesi ike na-ejikọ ndị Metropolitan Mayor Recep Altepe, kwuru na mmejuputa Altıparmak kasị mkpa nke T-1 akara ogbo enweghị etisa na gburugburu ebe obibi dị ka n'oge na-adịghị dị ka ha ji na-arụ ọrụ ma a gbasaa mezue. T-1 akara Stadium Street, Market Market na Darmstad Street mgbe mmalite nke nzọụkwụ Altparmak cheta na ọrụ ahụ malitere Altepe, a na-etinye nsonye 60'lık nke okporo ụzọ, ọ sịrị. Mayor Altepe, başlayan Malite na otu izu gara aga ...
Gbanwee na Bursa 'Altıparmak' na 'okporo ígwè' 06 / 11 / 2012 Bursa Mayor Altepe, T1 akara Altparmak nchọpụta na nchọpụta, ọrụ ga-agwụ agwụ 20 ụbọchị mgbe ihu nke Altiparmak'ın kpamkpam mgbanwe, o kwuru. Metro edoghi na Nchikota nke oge a malitere tram edoghi niile distrikti, na-emesi ike na-ejikọ ndị Metropolitan Mayor Recep Altepe, kwuru na mmejuputa Altıparmak kasị mkpa nke T-1 akara ogbo enweghị etisa na gburugburu ebe obibi dị ka n'oge na-adịghị dị ka ha ji na-arụ ọrụ ma a gbasaa mezue. T-1 akara Stadium Street, Market Market na Darmstad Street mgbe mmalite nke nzọụkwụ Altparmak cheta na ọrụ ahụ malitere Altepe, a na-etinye nsonye 60'lık nke okporo ụzọ, ọ sịrị. Mayor Altepe, "Otu izu ...
Ntụle na-atụ egwu: KAYAŞ-IRMAK-KIRIKKALE - ELECTRIFICATION ELECTRIFICATION CONCLUSION 16 / 04 / 2012 Kayaş - River - KIRIKKALE - CETINKAYA electrification mere TC State Railways na General Directorate (TCDD) Kayaş - River - Kırıkkale - Cetinkaya electrification Ọdịdị ụlọ ọrụ 4734 Mba ga-ọdịda site na-emeghe usoro site 19 nke Nkeji edemede ọha ị nweta iwu. Ihe ọmụma zuru ezu banyere obi na-depụtara n'okpuru. Obi Registration Number: 2012 / 37411 1-Administration a) okwu: TALATPAŞA BULVARI NO: 3 06330 GAR ALTINDAĞ-ANKARA b) Telephone na fax nọmba: 3123090515-239, 4139, 4409 - 3123115305 c) E-Mail Address: ihe @ TCDD. gov.t bụ atọ) obi akwụkwọ nwere ike hụrụ na internet adreesị: https: //ekap.kik.gov.tr/ekap / ...
ÇETİNKAYA-Edirne The n'oge mgbụsị akwụkwọ na-adọ nke akara-HORASAN Köprüköy ụgbọ KM.1223 + + 0000 1225-500 n'etiti akụrụngwa Mmelite ỌRỤ Obi 03 / 08 / 2012 Auction Ịrụ Ọrụ Dịịrị: Ismail Karahan Auction Manager ekwentị: 346221 70 00 / 4171 Auction Manager Fax: 346 221 32 54 Ilan Ụbọchị: 23.07.2012 00: 00: 00 Auction Ụbọchị: 14.08.2012 00: 00: 00-10: 30 nkọwapụta Cost: 100,00-TL obi Usoro:-arụ ọrụ obi Isiokwu: Construction ebipụta Registration No: 2012 / 90098 Mail: tcddsivasyolmd@hotmail.co akụrụngwa Mmelite Azụmahịa ị nweta mara REPUBLIC General Directorate nke steeti ụzọ ụgbọ okporo ígwè (TCDD) 4. Region Road Directorate ÇETİNKAYA-Edirne The n'oge mgbụsị akwụkwọ na-adọ EZIOKWU Köprüköy-HORASAN ụgbọ KM.1223 + 0000-1225 + 500 n'etiti akụrụngwa Mmelite ọrụ owuwu 4734 Mba ga-ọdịda site na-emeghe usoro site 19 nke Nkeji edemede ọha ị nweta iwu. Ihe ọmụma zuru ezu banyere obi na-depụtara n'okpuru. Obi Registration Number: 2012 / 90098 1-Administration a) okwu: Muhsin Yazicioglu BULVARI NO: 2 SÝVAS ...
Aha Hak-Sen Zonguldak Province Sener Yalcinkaya ahọrọ 26 / 05 / 2018 Transport na Railway Ọrụ 'Union (Ude m Hak-Sen) President of Zonguldak, pụtara ìhè ọrụ na ihe nweta Movement Officer e kenyere ya Sener Yalcinkaya. Ude m Hak-Sen, ọ bụla na ndọrọ ndọrọ ọchịchị otu si na-akwado na-agbaze ma ọ bụ iwu olmayacaktır na Mecucut ịlụ ileba anya ngosipụta na-anọ anya isiokwu, na tumadi n'ihi na ha bụ politicized aga-eme nke gosiri ogologo na iche iche Lanes a iji Ude m Hakan Ị ndidi ọzọ mgbe niile na ibufe ọrụ ma na-achọta ihe ngwọta nye nsogbu ha. Yalcinkaya Sen Zonguldak nwanna anyị, anyị president na anyị ọzọ Regional Isi nke Trade ịlụ president ga-aba obi abụọ ọ bụla na ndị a ibiere. Zonguldak ógbè na mba anyị anyị president ...
A ga-abawanye ụgbọ ala na Belkıs
Sivas Demirspor Club na-emepe Oge Ọhụrụ
Akara Mbinye aka maka Isi Obodo Noiseless
Oge Ego Kaadị Ego maka ndị debanyere aha ụmụ akwụkwọ nọ na Ankara
Pasent 90 nke Hinge Urban Design Road rụzuru
Akara Eskişehir nke Belarus Metro
Bursa bu nani olile anya nke ugbo elu Çanakkale!
Kedu mgbe a ga-emeghe Ọdụ Dergbọ oloko Derbent?
Mkpu Mkpesa Metrobus!
Mayor Yüce chọrọ ịga na akụkọ ihe mere eme site na iweta usoro ụgbọ oloko na Sakarya
Akwụkwọ ịtụnanya na Tram si Konya mepere
Samsun abụghị ihe dị mkpa maka ụzọ ụgbọ okporo ígwè, Erzincan-Trabzon abụghị Sarp
Technowood nwetara ihe nrite nke mbụ na emume mmeri nke Iconic Awards na Munich!
Companieslọ ọrụ ndị na-emefu ego R&D na 2018
Turkcell 25. Ememe
Blue Tie Worn na Ankara Station
Onye isi ụgbọ ọdụ TCDD Aydın Osman Gider tụfuru ndụ ya
RayHaber Ozi Ntanye 18.10.2019
Gbanwee na Bursa 'Altıparmak' na 'okporo ígwè'
Ntụle na-atụ egwu: KAYAŞ-IRMAK-KIRIKKALE - ELECTRIFICATION ELECTRIFICATION CONCLUSION
ÇETİNKAYA-Edirne The n'oge mgbụsị akwụkwọ na-adọ nke akara-HORASAN Köprüköy ụgbọ KM.1223 + + 0000 1225-500 n'etiti akụrụngwa Mmelite ỌRỤ Obi
Aha Hak-Sen Zonguldak Province Sener Yalcinkaya ahọrọ
Edere na okporo ụzọ Dubrovnik
Amalite Amalite Mmasị Kanuni Bulvarı
Mgbanwe ahụ na-arụ ọrụ n'agbata Gar Square na Mithatpaşa Station
Ahmet Emin Yilmaz: Mkpụrụ obi maka tram na Bursa, mgbanwe gbanwere
Süleyman Yıldız: Gbanwee usoro na TCDD
Akwụkwọ akụkọ Họrọ ọnwa October 2019 (340) September 2019 (555) August 2019 (508) July 2019 (633) June 2019 (504) Mee 2019 (526) April 2019 (418) March 2019 (521) February 2019 (483) January 2019 (502) Ogwe 2018 (620) November 2018 (504) October 2018 (435) September 2018 (517) August 2018 (486) July 2018 (506) June 2018 (581) Mee 2018 (467) April 2018 (545) March 2018 (554) February 2018 (500) January 2018 (557) Ogwe 2017 (509) November 2017 (427) October 2017 (538) September 2017 (455) August 2017 (505) July 2017 (479) June 2017 (477) Mee 2017 (493) April 2017 (434) March 2017 (540) February 2017 (477) January 2017 (538) Ogwe 2016 (487) November 2016 (631) October 2016 (657) September 2016 (542) August 2016 (608) July 2016 (485) June 2016 (661) Mee 2016 (664) April 2016 (700) March 2016 (804) February 2016 (855) January 2016 (751) Ogwe 2015 (799) November 2015 (640) October 2015 (624) September 2015 (428) August 2015 (493) July 2015 (505) June 2015 (535) Mee 2015 (577) April 2015 (622) March 2015 (1017) February 2015 (878) January 2015 (1077) Ogwe 2014 (963) November 2014 (826) October 2014 (771) September 2014 (598) August 2014 (808) July 2014 (911) June 2014 (735) Mee 2014 (957) April 2014 (972) March 2014 (864) February 2014 (720) January 2014 (733) Ogwe 2013 (664) November 2013 (656) October 2013 (548) September 2013 (570) August 2013 (533) July 2013 (661) June 2013 (577) Mee 2013 (734) April 2013 (1059) March 2013 (1102) February 2013 (811) January 2013 (906) Ogwe 2012 (911) November 2012 (1168) October 2012 (830) September 2012 (886) August 2012 (974) July 2012 (863) June 2012 (591) Mee 2012 (445) April 2012 (563) March 2012 (699) February 2012 (546) January 2012 (417) Ogwe 2011 (149) November 2011 (35) October 2011 (23) September 2011 (18) August 2011 (25) July 2011 (18) June 2011 (16) Mee 2011 (13) April 2011 (13) March 2011 (33) February 2011 (24) January 2011 (13) Ogwe 2010 (335) November 2010 (12) October 2010 (15) September 2010 (12) August 2010 (16) July 2010 (9) June 2010 (19) Mee 2010 (6) April 2010 (3) March 2010 (62) February 2010 (303) January 2010 (1838) Ogwe 2009 (4) November 2009 (1) October 2009 (3) September 2009 (3) August 2009 (2) June 2009 (3) Mee 2009 (2) April 2009 (3) March 2009 (9) February 2009 (4) January 2009 (3) November 2008 (1) October 2008 (1) September 2008 (2) August 2008 (1) July 2008 (2) June 2008 (2) Mee 2008 (2) April 2008 (1) March 2008 (3) February 2008 (5) January 2008 (2) Ogwe 2007 (2) October 2007 (2) July 2007 (1) Mee 2007 (1) April 2007 (1) February 2007 (2) January 2007 (1) Ogwe 2006 (1) October 2006 (3) August 2006 (1) June 2006 (2) Mee 2006 (2) April 2006 (2) March 2006 (2) November 2005 (2) August 2005 (1) June 2005 (1) March 2005 (2) February 2005 (1) January 2005 (1) Ogwe 2004 (1) October 2004 (3) July 2004 (1) Mee 2004 (2) Ogwe 2003 (1) October 2003 (1) Mee 2003 (1) March 2003 (1) February 2003 (1) January 2003 (1) Ogwe 2002 (1) October 2002 (4) August 2002 (1) April 2002 (1) March 2002 (2) January 2002 (2) July 2001 (1) June 2001 (1) March 2001 (1) Mee 2000 (3) March 1999 (1) October 1998 (2) March 1998 (1) August 1997 (1) October 1996 (1) August 1996 (2) Mee 1995 (1) August 1992 (1) Mee 1990 (1)
Akara Istanbul High Speed ​​Train Ticket Schedules and Schedule